Kotel Giant Mountain isithombe sendiza
I-boiler (Kesselkoppe ngesiJalimane) iyisiqongo esiphakeme esisezintabeni eziphakeme zaseCzech zezintaba zaseGiant. Itholakala engxenyeni yabo esentshonalanga esifundeni saseSemily esifundeni saseLeberec, inani eliphakeme kakhulu laso. Ukuphakama kwamamitha ayi-1435 ngaphezu kolwandle kwenza kube yintaba ye-10th ephakeme kakhulu eCzech Republic. Esikhathini esedlule lalibizwa ngeKrkonoše neKokrháč. Yintaba etholakala kumakhilomitha ayi-5 empumalanga ukusuka endaweni edumile yasendaweni yaseRokytnice nad Jizerou. Kukhona ezinye iziqongo ezibalulekile endaweni ezungezile, njengeLysá hora (1344 m), Amatshe aseHarrach's Stones (1421 m) noma iVlčí Ridge (1140 m). Ngasohlangothini oluseningizimu-mpumalanga luzungezwe i-Little and Large Boiler Pit, evame ukubekwa engozini ngama-avalanches ebusika. Njengazo zonke izintaba zeGiant, ibhulashi lalingiswa imibimbi kaHercynian futhi lenziwa ikakhulu nge-mica. I-boiler itholakala kalula ukusuka eRokytnice nad Jizerou, ukusuka lapho ikhebula imoto iholela khona phezulu eLysá hora, futhi ukusuka lapho ungaqhubeka ulandele ithambeka le-boiler ngomzila obomvu wokuhamba ngezinyawo. Kodwa-ke, inani eliphakeme ngokwalo alifinyeleleki njengoba lisendaweni yokuqala yeKrkonoše National Park futhi akukho migudu yokuhamba ngezinyawo eholela engqungqutheleni. Ngakolunye uhlangothi, i-boiler iyatholakala kusuka eGolden Hill, lapho ungathola khona, ngokwesibonelo, i-Elbe Spring, iLabská bouda, neHanče neVrbata Cairn eVrbat Hill. Emthambekeni we-boiler kunezindawo ezingaphansi kweRiphabhuliki Yokuqala, ezitholakala kakhulu. Ethambekeni le-boiler kukhona nengadi kaRůženka enodonga oluyindilinga olungamatshe lwamatshe. Indawo ezungezile inikeza amathuba amaningi okuvakasha ezintabeni. Izindawo ezivame ukwenzeka kakhulu zifaka phakathi i-Elbe entwasahlobo, iLabská bouda, amadwala aseViolík, uSněžné jámy nabanye. Ebusika, imizila iyaqoqwa yisikebhe esinamandla eqhwa, ngakho-ke imizila iyasizakala.
kubhayela Mountains ukudutshulwa kwendiza kusuka Above
Amathegi: kubhayela Mountains ukudutshulwa kwendiza kusuka Above